Wafti uu hogaaminayo M/weyne ku xigeenka Puntland oo booqday Galgala, lana kulmay odayaasha & taliyayaasha ciidanka daraawiishta (Taswiir). – Radio Daljir
Diseembar 4, 2010 12:00 b 0
Galgala, Dec 04 – Wafti sare oo uu hogaaminkayo M/weyne ku xigeenka Puntland Gen. C/samada Cali Shire ayaa safar halweed maanta ku tagay Galgala. Waftiga ayaa kulamo la yeeshay shacanka iyo odayaasha dhaqanka ee Galgala, kala hadlay qorshaha dawlada Puntland ee dib u dejinta dadkii ka barakacay deegaanka mudadii ay socdeen iska-horimaadyadii dhex maray ciidanka daraawiishta Puntland iyo kuwa taabacsanaa Maxamed Siciid Atam.
Khudbado: [ Dhegaysi …] Gen. Shire ayaa waxbixin ka dhegaystay Gen. Siciid Dheere, taliyaha ciidanka daraawiishta ee Puntland, kana xog warramay hawlgalladii amni ee ciidanka daraawiishtu ay ka fuliyeen Galgala iyo degmooyinka kale ee gobolka Bari ee ka ag dhaw.
Gen. Shire waxaa uu sheegay in wejigii 1-aad ee hawlgallada amniga la soo afjaray, hadana uu bilaalmi doono wejiga 2-aad oo ah wadaxaajood dhex mara shacabka deegaanka, odayaasha iyo madaxada dawlada Puntland.
Gen. Shire oo la hadlay odayaasha deegaanka ayaa sheegay in qaar ka mid ah ciidanku ay ku negaan doonaan Galgala, halka cutubyo ka mid ahna loo wareejin doono gobollada kale ee Puntland.
Waftiga sidoo kale kulamo la yeeshay saraakiisha ciidanka daraawiishta Puntland ee fadhigoodu yahay Galgala, sallaamna ka qaatay cutubyo ka tirsan ciidanka daraawiishta.
Qaar ka mid ah odayaasha dhaqanka ee Galgala oo goobjoog ka ahaa shirka ayaa sheegay in badi dadkii deegaanku ay ku soo laabteen Galgala, ayna diyaar u yihiin iskaashi iyo wada shaqayn dhex marta dadka deegaanka iyo madaxda dawlada.
Wasiirada amniga, qorshaynta, warfaafinta, iyo xanaanada xoolaha ayaa ka mid ahaa wasiirada booqday Galgala; wasiir ku xigeenada arrimaha gudaha, aminga, dekedaha ayaa ka mid ahaa waftiga.
30 arday oo ka baxay dugsiyada sare ee Puntland oo waxbarasho jaamacadeed ugu socdaalay Sudan.